တောင်ကိုးရီးယားမှ အရက်စက်ဆုံး မုဒိမ်းမှု... ဘယ်လောက်ထိ ရက်စက်လဲဆိုရင်... - APANNPYAY
Home / ရယ်စရာများ / နိုင်​ငံတကာသတင်း / တောင်ကိုးရီးယားမှ အရက်စက်ဆုံး မုဒိမ်းမှု... ဘယ်လောက်ထိ ရက်စက်လဲဆိုရင်...
တောင်ကိုးရီးယားမှ အရက်စက်ဆုံး မုဒိမ်းမှု... ဘယ်လောက်ထိ ရက်စက်လဲဆိုရင်...
Apann Pyay 4:58 PM ရယ်စရာများ , နိုင်​ငံတကာသတင်း Edit
တောင်ကိုးရီးယားမှ အရက်စက်ဆုံး မုဒိမ်းမှု...(2000-2005)
အဲဒီ အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကတော့ ကျမ(စာရေးသူ) အခုနေတဲ့ ဂွမ်ဂျူးဆိုတဲ့မြို့လေးမှာပေါ့။
အင်ဟွလို့အမည်ရှိတဲ့ ဆွံ့နားမကြား ပုဂ္ဂလိက ကျောင်းကို သူတို့ ၁၉၆၁ ခုနှစ်မှာစတည်ထောင်ခဲ့ကြတယ်။
အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့ ၂၀၀၀ ခုနှစ်မှာ ဒီကျောင်းရဲ့ပိုင်ရှင် ( ဥက္ကဋ္ဌ) ကတော့ ဒီကျောင်းကြီးကို စတင်တည်ထောင်သူရဲ့ သားမက်ဖြစ်ပါတယ်။
"ဆရာမ ကျမပြောစရာရှိလို့ပါ "
သူမ ချုံးပွဲချပြီးငိုတယ်။ ဆရာမက အားပေးလိုက်တယ်။ ဆွံ့ အနားမကြား ဘာသာဖြစ်တဲ့ လက်ဟန်ခြေဟန်နဲ့ သူမ စ ပြောပါတော့တယ်။
"ဆရာက ကျမကို ထမင်းစားဖိတ်တယ်။ ဆရာ့မိသားစုနဲ့ ကျမ ညစာအတူစားပါတယ်။ ကျမကို အဆောင်မပြန်ဘဲ ဆရာ့အိမ်မှာဘဲ အိပ်ဖို့ဆရာကပြောတယ်....။ကျမ ဆရာ့အိမ်ထဲက အခန်းလွတ်တခုမှာ အိပ်ပါတယ်။ မနက်မိုးလင်းတော့ ဆရာ့မိသားစုဝင်တွေ တာဝန်ကိုယ်စီနဲ့ အပြင်ထွက်သွားကြပါတယ်။ ဆရာက ကျမကို
ဆရာမဟာ ခေါင်းနပန်းကြီးသွားတယ်။ ဒီကျောင်းကိုပြောင်းလာတာ မကြာသေး ပြဿနာကစပြီလား....!
"သမီး တခါလောက် ဆရာမကိုထပ်ပြောပြနိုင်မလား?" ... ထပ်ခါထပ်ခါမေးမိတယ်။
ဆရာမ ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိဖြစ်သွားတယ်...အထိတ်တလန့်နဲ့ သူ့လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက် ဆရာမကို သွားပြောလိုက်တယ်။
"အရေးကြီးတယ်ရှင့်။ '---- 'ဆိုတဲ့ကျောင်းသူလေး မုဒိန်းကျင့်ခံရတယ်။ အဖြစ်က ဒီလိုတဲ့......။ ကျမတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြရင်ကောင်းမလဲ?။"
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဆရာမဟာ မကြားသလိုနဲ့ အခြားဖက်လှည့်ထွက်သွားတယ်။
ဆရာမဟာ နောက်တယောက်ဆီထပ်သွားပြီး ဒီအကြောင်းကိုထပ်ပြောလိုက်တယ်။
"ဪ... ဒါလား။ ဆရာမက မသိသေးလို့ ....ကလေးတွေက စိတ်သိပ်မနှံ့ ဘူးဗျ"
ကျောင်းဆရာက ကော်ဖီ အသောက်တောင် မပျက်...။
တချို့ ဆွံ့ အနားမကြားတဲ့ကလေးဟာ အထက်တန်း အောင်သွားပေမဲ့ မိဘမဲ့တွေဆိုတော့ ကျောင်းဝန်းထဲက အဆောင်မှာ ဆက်နေကြပြီး အစိုးရက ပေးတဲ့ အလုပ်လုပ်ကြရတယ်....သူတို့ တပတ်တခါတွေ့ကြ... ထမင်းအတူစားကြနဲ့ ...သူတို့ ကမ္ဘာလေးကိုဖန်တီးထားကြတယ်။
ဒီအုပ်စုထဲကကျောင်းသားဟောင်းကြီး တယောက်က ကျန်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေကို လက်ဟန်ခြေဟန်နဲ့ ပြောလိုက်တယ်။
"ညနေ ကျောင်းဆင်းချိန် ကျွန်တော် အဆောင်ဘက်ကိုသွားရင်း ဆရာက အလယ်တန်း ကျောင်းသူမလေးကို မုန့်တထုပ်ပေးလိုက်တာကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ ပြီးတော့ ကျောင်းသူလေးကို ကျောင်း အပေါ်ထပ် ၂ထပ်ကိုခေါ်သွားတယ်။ ကျနော်က မသင်္ကာလိုလိုက်ကြည့်တော့ဗျာ ...........မဖွယ်မရာ...............
ဆွံ့ အနေတဲ့ ဒုက္ခိတ သမီးလေးဟာ အမေ့ကို လက်ဟန် ခြေဟန်နဲ့ အမေကိုတောင်းပန်နေတယ်...။
"အမေ ... သမီးကျောင်းမသွားပါရစေနဲ့..."
အမေက လက်ဟန်ခြေဟန်နဲ့ ပြန်ပြောတယ်...။
"သမီးရယ် အမေ အလုပ်သွားရတော့မယ်။ အမေ အလုပ်လုပ်မှ သမီးကို ထမင်းကျွေးနိုင်မယ်....။ သမီးရေ..ကျောင်းမှာ သိုးမွှေးထိုးတာ သေချာသင်နော်...."
အမေရယ်.... သမီးအတွက် ဒီကျောင်းဟာ ငရဲပြည်ပါဘဲ...သူမတွေးရင်းနဲ့ မျက်ရည်ကို တိတ်တဆိတ်သုတ်လိုက်တယ်။ သမီးဟာ အမေစိတ်ဆင်းရဲမှာစိုးလို့ မပြောရက်တော့ဘဲ ကျောင်းသွားလိုက်တယ်။
နင်မျက်နှာလဲ မကောင်းပါလား။ ဘာဖြစ်လို့လဲ...လို့မေးလိ်ုက်တော့ သူငယ်ချင်းက
ငါကြောက်လိုက်တာ ...ငါ ဘဝပျက်နေပြီ..."
"အန်တီရယ်...ကျမက စာညံ့တယ်။ စာမေးပွဲမှာ အမှတ်နည်းရင် ဆရာကကျမကို........အဓမ္မ.....
ဒါအပြစ်ပေးတာလို့ ပြောတယ်..။ ကျမ ဒီအကြောင်း အမေ့ကို ပြောရင် သတ်ပစ်မယ်တဲ့... အန်တီတို့ လူမှုရေးအဖွဲ့က ကျမကိုကယ်ပါ "
"ဦးဦး...တနေ့က ဆရာက ခေါ်လို့ ကျမဆရာ့ရုံးခန်းထဲသွားတော့....ဆရာက သော့ပိတ်လိုက်တယ်....ပြီးတော့ ...ကျမကို မုဒိန်းကျင့်ပါတယ်....... "
"ဆရာမ ...အလုပ်သမားမိန်းမတွေ အဝတ်လျှော်စက်ထဲရေထည့်ပြီးကျမကိုထည့်လှည့်တယ်။ ကျမမူးပြီး နှာခေါင်းကသွေးတွေထွက်လာတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့ရယ်မောကြတယ်။ ဆရာနဲ့ကိစ္စကို အမေကိုပြန်ပြောရင် ပိုလုပ်မယ်တဲ့"
ဒီအသံတွေဟာ...မုဒိန်းကျင့်ခံရတဲ့ကလေးတွေကို အင်တာဗျူးထားတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်....။
ဟိုဆရာက ဒီကလေးတွေ အားလုံး ဘဲ စိတ်မနှံ့နေသလိုလို.....။ ဘုရား ဘုရား ဒီကျောင်းထဲမှာ ကမ္ဘာပျက်နေပါရော့လား....။ ဆရာမဟာ ပူလောင်စွာနဲ့ ငိုရတယ်။
ကြောက်လဲကြောက်တယ်။ ဒီမှာရှိတဲ့ ဆရာတွေ အားလုံးက သူမထက် အရင်စောရောက်သူတွေ...လုပ်သက်ရင့်သူတွေကိုး...အထက်အရာရှိတွေကိုး။
နောက်ဆုံးတော့ မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့ ဆရာမဟာ ကျောင်းအုပ်ကြီး ရုံးခန်းထဲဝင်သွားတော့တယ်။
အင်း.. ကျောင်းအုပ်ကြီးကတော့ အမှန်တရားမြတ်နိုးပြီး တည်ကြည်တဲ့ပုံပေါက်တယ်...။
"ဆရာကြီး... ကျမ တပည့်တွေကိုကယ်ပါ။ ကျောင်းထဲမှာ မုဒိန်းကျင့်မှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ ကျမသိရသလောက် ၁၂ ယောက်ရှိပါပြီ။ ကယ်ပါ.."
ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးက ဆရာမကို စကားမပြောဘဲ တခဏတာစိုက်ကြည့် နေလိုက်တယ်။ ဆရာမ က အားကိုးတကြီး ပြန်ကြည့်လိုက်တယ်။ ဆရာကြီးကတလုံးချင်းပြောလိုက်တယ်။
"ခွေးမ...။ ငါ့ကို လာပြောရဲတဲ့ သတ္တိက နည်းတာမှမဟုတ်ဘဲ။ အဲဒါများငါ့လာပြောနေရလား? ရဲသွားတိုင်လေ ..."
"ရဲသွားတိုင်လေ။ ဒါမှ နင့်ကို ငါက အသရေဖျက်မှုနဲ့ ထောင်ထဲထည့်လို့ရမှာ..။ ကျက်သရေတုံးလိုက်တာ...အခန်းထဲကထွက်သွားစမ်း..." ။
ဆရာမဟာ ချက်ချင်း အလုပ်ဖြုတ်ခံရတယ်။
သူမဟာ အိမ်မက်ဆိုးကြီးထဲရောက်နေသလိုတုန်လှုပ်နေခဲ့တယ်။ ဒီကလေးတွေကို မျက်နှာလွဲခဲပစ် ဘယ်လိုထားခဲ့ရပါ့မလဲ...?
ဒီဆွံ့ အနားမကြား ကျောင်းက အဲဒီအချိန်က ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးက ကျောင်းပိုင်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ သားအကြီးဆုံး။
ဒီကျောင်းက အုပ်ချုပ်ရေးမှုးက ဒုတိယမြောက်သား။
ဒီကျောင်းက ဆရာ/ဆရာမ ခန့်ခွဲရေးလုပ်တဲ့တဲ့ ကျောင်းဆရာများခေါင်းဆောင်ကလဲ သူတို့အမျိုး။
အလုပ်သမားတွေကလဲ သူတို့နဲ့ ဆွေမျိုးနီးစပ်တွေ...။
ဆွံ့နားမကြားကျောင်းက ကလေးတွေဟာ စက်ရုပ်တွေလို မသိကျိုးကျွန်ပြုနေကြတဲ့ ဆရာ ဆရာမ အဟောင်းတွေကိုအကူအညီတောင်းမိရင် နောက်တနေ့ ထိုထက်ဆိုးသော အဖြစ်များကြုံတွေ့ရတာကြောင့်... ဆရာမ အသစ်နဲ့ လူမှုရေးအသင်းတွေကိုလာပြောနေကြတာဘဲဖြစ်တယ်။
ဆွံ့ အနားမကြားကလေးတို့ရဲ့ မိသားစုတွေဟာ များသောအားဖြင့် ဆင်းရဲကြတယ်။ မိဘတွေကပါ ဒုက္ခိတတွေမို့ စီးပွားရေး မပြေလည်ကြသူတွေများပါတယ်။ သားသမီးများကို ဂရုမစိုက်နိုင်ပါ။ ကလေးများကလဲ ကြောက်လန့်၍ မိဘများကို မပြောကြပါ...။
ဆရာမဟာ ရဲစခန်းကိုလဲ သွားပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။
"ဪ... ဟုတ်ကဲ့... သက်သေခံအထောက်အထားမရှိဘဲ ဒီလို ဂုဏ်သရေရှိတဲ့ လူကြီးမင်းတွေကို မေးမြန်းဖို့ဆိုတာ ဥပဒေအရ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။"
ကျန်တဲ့ ဆရာဆရာမတွေရော ပါးစပ်ပိတ် အခြိမ်းခြောက်ခံနေရပုံဘဲ။ ဆရာမနဲ့ ပရဟိတလူမှုရေး အသင်းတွေ.. ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းတွေဟာကူညီဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ အချည်းနှီးပါ။
ဒီဂွမ်ဂျူးမြို့လေးမှာ သူတို့ကိုလှန်ရဲသူမရှိ။ ထောက်လှမ်းရေးအထိ တက်ပြောလဲမထူးခြား....။
တာဝန်ရှိသူတွေဟာ သူတို့နာမည်ကြားလိုက်တာနဲ့ နားပင်းချင်ယောင်ဆောင်နေကြတယ်။
အမှန်တော့ သူတို့ဟာ အရမ်းချမ်းသာတာတာမို့ သူ့တို့ပိုက်ဆံတွေနဲ့ အားလုံးကိုလွှမ်းမိုးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ သွေးအေးရက်စက်သူတွေအဖြစ် နာမည်ကြီးသူများလဲဖြစ်လို့ တမြို့လုံးကကြောက်ကြပါတယ်။
သူတို့ကိုထိရင် တမျိုးလုံးတဆွေလုံးကို ဒုက္ခရောက်သွားမယ်ဆိုတာ ဒီမြို့ကလူတွေ အားလုံး သိနေကြတယ်။
သူတို့ဟာ ဂွမ်ဂျူးမြို့ရဲ့ အချမ်းသာဆုံး လူမိုက်တွေပေါ့.....။
ဒီလိုနဲ့....သူတို့ အုပ်စုလိုက် မုဒိန်းကျင့်တဲ့သတင်းဟာ တိုးတိုးတိတ်တိတ် ပျံ့နှံ့လာခဲ့တယ်။ MBC ဆိုတဲ့ ကိုးရီးယား ရုပ်မြင်သံကြားဌာနအထိရောက်သွားတယ်။ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းအချို့နဲ့ ရုပ်မြင်သံကြားအဖွဲ့က တိတ်တဆိတ်ထောက်လှမ်းခဲ့နေကြတယ်။
သူတို့တွေ ရဲတင်းလာကြတယ်။ဒုက္ခရင်ဆိုင်ရရင် အသံထွက်ပြီး မအော်နိုင်တဲ့ ဒုက္ခိတလေးတွေမို့ ဆရာတွေသာမက အလုပ်သမားတွေကပါ မုဒိန်းကျင့်လာကြတယ်။
ဒီအဓမ္မမှု စပြီးပေါက်ကြားခဲ့တာ ၂၀၀၀ ခုနှစ်ပါ..ဘယ်သူမှ ဘာမှမတတ်နိုင်ခဲ့တာ ၂၀၀၅ နှစ်အထိရောက်ခဲ့ပါတယ်။
ဆရာ ဆိုတဲ့ အရေခြုံပြီး ဆွံ့ အ နားမကြားတဲ့ ဒုက္ခိတလေးတွေကို လိုရာသုံးပြီ...။
ဆွံ့ အ နားမကြား ကလေးမလေး
တယောက်ဟာ ကိုယ်ဝန်ရှိလာတယ်။သူတို့ဟာ ကလေးမလေးကို ဆေးရုံခေါ်သွားပြီး ကလေးဖျက်ချလိုက်တယ်...။
"ဟုတ်ပြီ...ဒါဟာ သက်သေဘဲ။ ဆေးမှတ်တမ်းရှိနေတယ်" ...။
ရုပ်မြင်သံကြား (MBC) မှစုံစမ်းရေး အဖွဲ့နဲ့ ကူညီသူတချို့ဟာ ကျောင်းသူလေး သောက်ရတဲ့ဆေးစာရွက်ကို သက်သေခံအဖြစ် သေချာသိမ်းလိုက်ပါတော့တယ်။
၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ ကိုးရီးယား MBC အသံလွင့်ရုံမှ သတင်းကြေငြာလိုက်ပါတယ်။
"ဂွမ်ဂျူးမြို့ အင်ဟွ ဆွံ့အနားမကြားကျောင်းမှာ မုဒိန်းမှုတွေဖြစ်ပွားနေကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။"
တိုင်းပြည်က သိသွားတော့တယ်။ လူထုက ဆန္ဒပြကြတယ်။ သမ္မတက အထူးထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ဖွဲစေပြီး စုံစမ်းမှုကို စတင်ခဲ့ပါတယ်။
ဆင်းရဲလို့ ရှေ့နေမငှားနိုင်တဲ့ ဆွံ့ အ နားမကြားမိသားစုတွေကို အစိုးရရှေ့နေတွေကကူညီကြတယ်။
မုဒိန်းကျင့်ခံရတဲ့ မိန်းကလေး ၉ ယောက်က တရားလိုအဖြစ် တရားဆိုင်ပါတယ်။ ဒီ ၉ ယောက်ကလွဲပြီး ကျန်တဲ့ မိန်းကလေးနဲ့ ယောကျာ်းလေးတွေကတော့ အကြောက်လွန်ပြီးမလိုက်ရဲပါဘူး။ တချို့ကလဲ မိသားစုလိုက် ပိုက်ဆံပေး ခြိမ်းခြောက်ထားခြင်းခံရလို့ ဘယ်လို ခေါ်ခေါ်မလိုက်ရဲကြဘူး။
တဖက်က အင်ဟွကျောင်းမှ ကျောင်းဆရာများ အလုပ်သမား စုစုပေါင်း ၆ ယောက်ကို တရားခံအဖြစ်နဲ့ တရား ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။
တရားလို မိန်းကလေးတယောက်က အဆိုတခုတင်သွင်းလိုက်တယ်။
"ကျမကို ဘယ်နေ့ ဘယ်ရက် ဘယ်အချိန် ဘယ်နေရာမှာ မုဒိန်းကျင့်ခံခဲ့ရတယ်။"
"သမီးကို မုဒိန်းကျင့်တာ ဘယ်သူလဲ"
စကားမပြောနိုင်တာကြောင့် သူမဟာ တရားခံကို လက်ညှိုးထိုးပြီး ပြလိုက်တယ်။
အင်ဟွဖက်က ရှေ့နေက ကျောင်းမှတ်တမ်းကို လှန်ကြည့်လိုက်တယ်။
"ဒီကလေးမဟာ ဒီအချိန်မှာ ဘယ်သူ ဘယ်ဝါနဲ့ ထမင်းစားနေခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ လိမ်တာပါ...။"
ဒီလို.......နဲ့ အစစ အရာရာ စေ့စေ့စပ်စပ် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ ကြောင်သူတော်အုပ် စုဟာ ဆွံ့ အ နားမကြားတဲ့ကလေးတွေကိုတရား ခွင်မှာ အနိုင်ယူခဲ့ပြန်တယ်။ ဒုက္ခိတ ကလေးတွေ တရားရှုံးပါတယ်။
ဒီသတင်းကြားတဲ့ အသက် ၇၁နှစ်အရွယ် အင်ဟွကျောင်းမှ ကျောင်းဆရာဟောင်းတယောက်က မခံစားနိုင်တော့ပြီလေ...။ သူဟာအစိုးရရှေ့နေကို ဆက်သွယ်လာပါတယ်။
"၁၉၆၄ ခုနှစ်ကပါခင်ဗျာ။ သူတို့လှို့ ဝှက်ချက်ကိုသိနေတဲ့ ကျနော့်ကို ကျောင်းအုပ်ကြီးနဲ့ သူ့ညီက ကျနော့်ကို ရိုက်နှက်ပြီး ကျောင်းကထုတ်ပစ်တယ်... ခြိမ်းခြောက်မှုတွေကိုလဲ ဆက်တိုက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။"
"လှို့ ဝှက်ချက်က ဘာလဲခင်ဗျာ?" ရှေ့နေကမေးလိုက်တယ်။
" ကျောင်းအုပ်ကြီးတို့ ညီအကိုဟာ ဒီဓာတ်ပုံထဲမှာပါတဲ့ ဆွံ့ အ နားမကြား ကျောင်းသားလေး (အသက် ၇ နှစ်) ကို ရိုက်နှက်ပြီး အစာလုံးဝမကျွေးဘဲ သေတဲ့အထိ အခန်းထဲ ထည့်ထားခဲ့တယ်။ အစာငတ်ပြီးသေသွားတော့မြေမြုပ်လိုက်ပါတယ်။
နောက်ထပ် ၆ လအကြာ ကျာင်းသူမလေးကို အစားငတ်ထားပြီး အခန်းထဲ သေတဲ့အထိ ထည့်လှောင်ခဲ့ပါတယ် ..။အသက် ၆ နှစ်အရွယ် ကလေးမလေးဟာ ဗိုက်ဆာလွန်းလို့ နံရံမှာကပ်ထားတဲ့ စက္ကူတွေကို ခွာစားခဲ့တာ ကျနော် တွေ့ပါတယ်။ သူတို့ကို လူသတ်မှုနဲ့တရားစွဲပေးပါခင်ဗျား"
ဒီဟာလဲ သက်သေမခိုင်လုံလို့ အပယ်ချခံခဲ့ရတယ်။
နောက်ဆုံးတော့ တရားလိုရဲ့ ရှေ့နေဟာ နောက်ဆုံး ဝှက်ဖဲကိုချပြလိုက်တယ်။
"ကလေမဟာ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခဲ့ပါတယ်။ ဒါကတော့ အဲဒိနေ့က သူသောက်ခဲ့တဲ့ဆေး စာရွက်ပါ။"
နောက်တပတ်ကျတော့ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခဲ့တဲ့ ဆရာဝန် အစစ်ခံရပါတယ်။
ဆရာဝန်က ဆေးမှတ်တမ်းနှင့်တကွ သက်သေပြပြီးထွက်ဆိုလိုက်ပါတယ်။
"ဘယ် ကိုယ်ဝန်မှ ကျနော်ဖျက်မချခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာ။ နေမကောင်းလို့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးပေးခဲ့တာပါ။"
မုဒိန်းမှုဆိုတဲ့ ကြီးလေးတဲ့အမှုကြီးကို တရားခံဘက်က ချေဖျက်နိုင်ခဲ့တယ်။ ကလေးများကို နှိပ်စက်မှု.. စိတ်နာကျင်အောင် ပြုလုပ်မှု စသည် စသည်ဖြင့်...တရားခံ ၆ ယောက်ထဲက ၂ ယောက်ကတော့ ဂွမ်ဂျူးမြို့ထဲက အပြင်မထွက်ခွင့် (အကျယ်ချုပ်)နဲ့ ထောင် ရှစ်လသာကျခဲ့ပါတယ်။အမှုက ၈ လကျော်ကြာခဲ့တာကြောင့် ချေလိုက်ပြီးအကျယ်ချုပ်တောင် တရက်တောင်မှမကျခဲ့ပါဘူး။
ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး ( သားအကြီးဆုံးက ) အလုပ်ကြမ်းနဲ့ထောင်ဒါဏ် ၅ နှစ် (သို့)ဒါဏ် ငွေ သုံးသန်း ...။ သူဟာ ဒါဏ်ငွေပေးဆောင်နိုင်သဖြင့် ထောင်ထဲမှာမနေခဲ့ရပါ။
ကျန်သူတွေ ကတော့ ၁နှစ်တောင်မပြည့်တဲ့ ထောင်ဒဏ်ဘဲရခဲ့ပါတယ်။
အယူ ခံလုံးဝ ထပ်မရတော့ပါ။
ဒီအဓမ္မအမှုဟာ များစွာသော ကိုးရီးယားပြည်သူတွေကို မျက်ရည်ကျ နာကျင်စေပါတယ်။အမှန်တရားကိုလိုလားတဲ့ ပြည်သူတွေဟာ ဆွံ့ အနားမကြား ဒုက္ခိတ ကျောင်းသူကျောင်းသားလေးတွေ ဒီလို စိတ်ဓာတ် အရိုက်ချိုးခံလိုက်ရတာကို ဝမ်းနည်းကြပါတယ်။
သူတို့ဟာ ဘယ်လိုမှ အယူခံမရ နောက်ဆုံးမှာ ဒီအဖြစ်အပျက်အမှန်ကို ရုပ်ရှင်ကတဆင့် ကမ္ဘာသိအောင်လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။
ဆွံ့ အ နားမကြားကလေးတွေရဲ့ နာကျင်မှုကို ကိုယ်စားပြုပြီး "도가니" လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ကို "Silenced" လို့လူသိများပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ထွက်လာတဲ့အခါ ...၆ နှစ်ကြာခဲ့ပြီမို့ မေ့ပျောက်သလောက်ဖြစ်နေတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့နာကျည်းချက်ဟာ ပြန်လည်ရှင်သန်ခဲ့တယ်။ လူထုအုံကြွမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။
အပြစ်မရှိသလို ဟန်မပျက်ဆက်ဖွင့်ထားတဲ့ အင်ဟွ ကျောင်းကြီးကို သူတို့တွေ ပိတ်ခဲ့ရပါတယ်။
တရားရုံးမှာ အမှုပြန်လည်ဖွင့်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ အသက် ၆၃ နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ အုပ်ချုပ်ရေမှုး( ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ ဒုတိယမြောက်သား ) ဟာ ၁၈ နှစ်မိန်းကလေးကို မုဒိန်းကျင့်တယ်ဆိုတာ ထပ် ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီး ထောင်ဒါဏ် ၁၂နှစ်ကျခဲ့ပါတယ်။
ဒီဖြစ်ရပ်မှာ တောင်ကိုးရီးယားတို့ရဲ့ ငုံ့မခံတတ်တဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့စည်းလုံးမှုဟာ ကမ္ဘာက ချီးကျူး အသိအမှတ်ပြုရပါတယ်။
ကံဆိုးလို့ မွေးရာပါ စကားမပြာနိုင်တဲ့....
အသံထွက်ပြီး အော်ဟစ် အကူအညီမတောင်းနိုင်တဲ့ ......
ဆင်းရဲတဲ့ ကလေးတို့ရဲ့ နာကျင်မှုတွေ...
မျက်ရည်တွေဟာ ကာလကြာရှည်စွာ လစ်လျူရှုခြင်းကို ခံခဲ့ရတယ်...။
ဘဝ နိမ့်ကျတဲ့သူတို့လေးတွေကို နှစ်ပေါင်းများစွာ လိင်ကျွန်အဖြစ်ဆက်ဆံခဲ့သူတွေဟာ ဂုဏ်သရေရှိ...လူချမ်းသာ...ကျောင်းဆရာဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်တွေနဲ့ အမှန်တရားရဲ့ပါးစပ်ကို နှစ်ပေါင်းများစွာပိတ်ထားနိုင်ခဲ့တယ်...။
စကားမပြောတတ်တဲ့ ကလေးများဟာ ဘဝပေးအခြေအနေအရ စကားမပြောတတ်ခြင်းဖြစ်ပေမဲ့ စကားပြောတတ်တဲ့ လူ့ဘောင်လောကကြီးကလည်း ဂုဏ်ရှိန်ဝါ ငွေကြေးတို့ရဲ့ ဖိနှိပ်မှုအောက်မှာ အ, နေခဲ့ကြတယ်....။
ငွေကြေးကြောင့် ပါးစပ်ပိတ် အ, နေခြင်းဟာ သူရဲဘောကြောင်ပြီး ရှက်စရာကောင်းလွန်းတယ်ဆိုတာကို မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတဲ့သူတွေရှိသလို .....ဂုဏ်ရှိန်ဝါမျက်နှာဖုံးအောက်မှာ ယုတ်ညံ့တာတွေလုပ်နေတဲ့ လူကြီးလူကောင်းအမည်ခံတွေကလည်း သူတို့ရဲ့ ယုတ်မာမှုကို တန်ခိုးသြဇာပြည့်စုံခြင်းလို့ထင်ပြီး မာန်တက်နေကြလေရဲ့...။
ဒီလူတွေအတွက် ဆင်းရဲသား လူတန်းစားတွေဟာ ဘယ်အချိန်အထိ စတေးနေရမှာပါလဲ..!?
ကျမတို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း အနှစ် ၅၀လုံးလုံး ...အခုထက်ထိ...အဓမ္မမှုတွေ အလွန်များလွန်းလို့ ခေါက်ရိုးကျိုးသလိုတောင်ဖြစ်နေပါပြီ...။ဒါအတွက် ကျမတို့ ဘာလုပ်ကြမလဲ...?
ကျမတို့လဲတောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ ကောင်းသောအချက်တွေကို အတုယူရပါမယ်...။ဒါတွေကတော့....
🌟မတရားမှုကို ငုံ့မခံပဲ ရဲရင့်မှု..။
🌟တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ရိုင်းပင်းကူညီပြီးပြည်သူအချင်းချင်း အကာအကွယ်ပေးမှု..။
ငွေကြေးကြောင့် ပါးစပ်ပိတ်ပြီး အ, နေခြင်းမှ အမြန်ဆုံးနိုးထပြီး အမှန်တရားပါးစပ်များ ရဲရဲဝင့်ဝင့် ပွင့်နိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်...။
မတရားမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခြင်းဟာ ကိုယ်နဲ့တိုက်ရိုက်မသက်ဆိုင်ရင်တောင် လူသားမျိုးနွယ်တစ်ဦးအနေနဲ့ တာဝန်ရှိတယ်လို့သာ ခံယူလာနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ အဓမ္မဝါဒီများ သက်ဆိုးမရှည်နိုင်ကြလိမ့်ဘူးလို့ မျှော်လင့်မိကြောင်းပါ...။
ဇွန်လ ၃၀ ရက် ၂၀၁၇
တောငျကိုးရီးယားမှ အရကျစကျဆုံး မုဒိမျးမှု...(2000-2005)
အဲဒီ အခငျးဖွဈပှားတဲ့နရောကတော့ ကမြ(စာရေးသူ) အခုနတေဲ့ ဂှမျဂြူးဆိုတဲ့မွို့လေးမှာပေါ့။
အငျဟှလို့အမညျရှိတဲ့ ဆှံ့နားမကွား ပုဂ်ဂလိက ကြောငျးကို သူတို့ ၁၉၆၁ ခုနှဈမှာစတညျထောငျခဲ့ကွတယျ။
အခငျးဖွဈပှားတဲ့ ၂၀၀၀ ခုနှဈမှာ ဒီကြောငျးရဲ့ပိုငျရှငျ ( ဥက်ကဋ်ဌ) ကတော့ ဒီကြောငျးကွီးကို စတငျတညျထောငျသူရဲ့ သားမကျဖွဈပါတယျ။
"ဆရာမ ကမြပွောစရာရှိလို့ပါ "
သူမ ခြုံးပှဲခပြွီးငိုတယျ။ ဆရာမက အားပေးလိုကျတယျ။ ဆှံ့ အနားမကွား ဘာသာဖွဈတဲ့ လကျဟနျခွဟေနျနဲ့ သူမ စ ပွောပါတော့တယျ။
"ဆရာက ကမြကို ထမငျးစားဖိတျတယျ။ ဆရာ့မိသားစုနဲ့ ကမြ ညစာအတူစားပါတယျ။ ကမြကို အဆောငျမပွနျဘဲ ဆရာ့အိမျမှာဘဲ အိပျဖို့ဆရာကပွောတယျ....။ကမြ ဆရာ့အိမျထဲက အခနျးလှတျတခုမှာ အိပျပါတယျ။ မနကျမိုးလငျးတော့ ဆရာ့မိသားစုဝငျတှေ တာဝနျကိုယျစီနဲ့ အပွငျထှကျသှားကွပါတယျ။ ဆရာက ကမြကို
ဆရာမဟာ ခေါငျးနပနျးကွီးသှားတယျ။ ဒီကြောငျးကိုပွောငျးလာတာ မကွာသေး ပွဿနာကစပွီလား....!
"သမီး တခါလောကျ ဆရာမကိုထပျပွောပွနိုငျမလား?" ... ထပျခါထပျခါမေးမိတယျ။
ဆရာမ ခွမေကိုငျမိ လကျမကိုငျမိဖွဈသှားတယျ...အထိတျတလနျ့နဲ့ သူ့လုပျဖျေါကိုငျဖကျ ဆရာမကို သှားပွောလိုကျတယျ။
"အရေးကွီးတယျရှငျ့။ '---- 'ဆိုတဲ့ကြောငျးသူလေး မုဒိနျးကငျြ့ခံရတယျ။ အဖွဈက ဒီလိုတဲ့......။ ကမြတို့ဘယျလိုလုပျကွရငျကောငျးမလဲ?။"
လုပျဖျောကိုငျဖကျဆရာမဟာ မကွားသလိုနဲ့ အခွားဖကျလှညျ့ထှကျသှားတယျ။
ဆရာမဟာ နောကျတယောကျဆီထပျသှားပွီး ဒီအကွောငျးကိုထပျပွောလိုကျတယျ။
"ဪ... ဒါလား။ ဆရာမက မသိသေးလို့ ....ကလေးတှကေ စိတျသိပျမနှံ့ ဘူးဗြ"
ကြောငျးဆရာက ကျောဖီ အသောကျတောငျ မပကျြ...။
တခြို့ ဆှံ့ အနားမကွားတဲ့ကလေးဟာ အထကျတနျး အောငျသှားပမေဲ့ မိဘမဲ့တှဆေိုတော့ ကြောငျးဝနျးထဲက အဆောငျမှာ ဆကျနကွေပွီး အစိုးရက ပေးတဲ့ အလုပျလုပျကွရတယျ....သူတို့ တပတျတခါတှကွေ့... ထမငျးအတူစားကွနဲ့ ...သူတို့ ကမ္ဘာလေးကိုဖနျတီးထားကွတယျ။
ဒီအုပျစုထဲကကြောငျးသားဟောငျးကွီး တယောကျက ကနျြတဲ့သူငယျခငျြးတှကေို လကျဟနျခွဟေနျနဲ့ ပွောလိုကျတယျ။
"ညနေ ကြောငျးဆငျးခြိနျ ကြှနျတျော အဆောငျဘကျကိုသှားရငျး ဆရာက အလယျတနျး ကြောငျးသူမလေးကို မုနျ့တထုပျပေးလိုကျတာကို တှလေို့ကျရတယျ။ ပွီးတော့ ကြောငျးသူလေးကို ကြောငျး အပျေါထပျ ၂ထပျကိုချေါသှားတယျ။ ကနြျောက မသင်ျကာလိုလိုကျကွညျ့တော့ဗြာ ...........မဖှယျမရာ...............
ဆှံ့ အနတေဲ့ ဒုက်ခိတ သမီးလေးဟာ အမကေို့ လကျဟနျ ခွဟေနျနဲ့ အမကေိုတောငျးပနျနတေယျ...။
"အမေ ... သမီးကြောငျးမသှားပါရစနေဲ့..."
အမကေ လကျဟနျခွဟေနျနဲ့ ပွနျပွောတယျ...။
"သမီးရယျ အမေ အလုပျသှားရတော့မယျ။ အမေ အလုပျလုပျမှ သမီးကို ထမငျးကြှေးနိုငျမယျ....။ သမီးရေ..ကြောငျးမှာ သိုးမှေးထိုးတာ သခြောသငျနျော...."
အမရေယျ.... သမီးအတှကျ ဒီကြောငျးဟာ ငရဲပွညျပါဘဲ...သူမတှေးရငျးနဲ့ မကျြရညျကို တိတျတဆိတျသုတျလိုကျတယျ။ သမီးဟာ အမစေိတျဆငျးရဲမှာစိုးလို့ မပွောရကျတော့ဘဲ ကြောငျးသှားလိုကျတယျ။
နငျမကျြနှာလဲ မကောငျးပါလား။ ဘာဖွဈလို့လဲ...လို့မေးလျိုကျတော့ သူငယျခငျြးက
ငါကွောကျလိုကျတာ ...ငါ ဘဝပကျြနပွေီ..."
"အနျတီရယျ...ကမြက စာညံ့တယျ။ စာမေးပှဲမှာ အမှတျနညျးရငျ ဆရာကကမြကို........အဓမ်မ.....
ဒါအပွဈပေးတာလို့ ပွောတယျ..။ ကမြ ဒီအကွောငျး အမကေို့ ပွောရငျ သတျပဈမယျတဲ့... အနျတီတို့ လူမှုရေးအဖှဲ့က ကမြကိုကယျပါ "
"ဦးဦး...တနကေ့ ဆရာက ချေါလို့ ကမြဆရာ့ရုံးခနျးထဲသှားတော့....ဆရာက သော့ပိတျလိုကျတယျ....ပွီးတော့ ...ကမြကို မုဒိနျးကငျြ့ပါတယျ....... "
"ဆရာမ ...အလုပျသမားမိနျးမတှေ အဝတျလြှျောစကျထဲရထေညျ့ပွီးကမြကိုထညျ့လှညျ့တယျ။ ကမြမူးပွီး နှာခေါငျးကသှေးတှထှေကျလာတယျ။ ပွီးတော့ သူတို့ရယျမောကွတယျ။ ဆရာနဲ့ကိစ်စကို အမကေိုပွနျပွောရငျ ပိုလုပျမယျတဲ့"
ဒီအသံတှဟော...မုဒိနျးကငျြ့ခံရတဲ့ကလေးတှကေို အငျတာဗြူးထားတာတှေ ဖွဈပါတယျ....။
ဟိုဆရာက ဒီကလေးတှေ အားလုံး ဘဲ စိတျမနှံ့နသေလိုလို.....။ ဘုရား ဘုရား ဒီကြောငျးထဲမှာ ကမ္ဘာပကျြနပေါရော့လား....။ ဆရာမဟာ ပူလောငျစှာနဲ့ ငိုရတယျ။
ကွောကျလဲကွောကျတယျ။ ဒီမှာရှိတဲ့ ဆရာတှေ အားလုံးက သူမထကျ အရငျစောရောကျသူတှေ...လုပျသကျရငျ့သူတှကေိုး...အထကျအရာရှိတှကေိုး။
နောကျဆုံးတော့ မခံမရပျနိုငျဖွဈနတေဲ့ ဆရာမဟာ ကြောငျးအုပျကွီး ရုံးခနျးထဲဝငျသှားတော့တယျ။
အငျး.. ကြောငျးအုပျကွီးကတော့ အမှနျတရားမွတျနိုးပွီး တညျကွညျတဲ့ပုံပေါကျတယျ...။
"ဆရာကွီး... ကမြ တပညျ့တှကေိုကယျပါ။ ကြောငျးထဲမှာ မုဒိနျးကငျြ့မှုတှဖွေဈပှားနပေါတယျ။ ကမြသိရသလောကျ ၁၂ ယောကျရှိပါပွီ။ ကယျပါ.."
ကြောငျးအုပျဆရာကွီးက ဆရာမကို စကားမပွောဘဲ တခဏတာစိုကျကွညျ့ နလေိုကျတယျ။ ဆရာမ က အားကိုးတကွီး ပွနျကွညျ့လိုကျတယျ။ ဆရာကွီးကတလုံးခငျြးပွောလိုကျတယျ။
"ခှေးမ...။ ငါ့ကို လာပွောရဲတဲ့ သတ်တိက နညျးတာမှမဟုတျဘဲ။ အဲဒါမြားငါ့လာပွောနရေလား? ရဲသှားတိုငျလေ ..."
"ရဲသှားတိုငျလေ။ ဒါမှ နငျ့ကို ငါက အသရဖေကျြမှုနဲ့ ထောငျထဲထညျ့လို့ရမှာ..။ ကကျြသရတေုံးလိုကျတာ...အခနျးထဲကထှကျသှားစမျး..." ။
ဆရာမဟာ ခကျြခငျြး အလုပျဖွုတျခံရတယျ။
သူမဟာ အိမျမကျဆိုးကွီးထဲရောကျနသေလိုတုနျလှုပျနခေဲ့တယျ။ ဒီကလေးတှကေို မကျြနှာလှဲခဲပဈ ဘယျလိုထားခဲ့ရပါ့မလဲ...?
ဒီဆှံ့ အနားမကွား ကြောငျးက အဲဒီအခြိနျက ကြောငျးအုပျဆရာကွီးက ကြောငျးပိုငျရှငျဥက်ကဋ်ဌရဲ့ သားအကွီးဆုံး။
ဒီကြောငျးက အုပျခြုပျရေးမှုးက ဒုတိယမွောကျသား။
ဒီကြောငျးက ဆရာ/ဆရာမ ခနျ့ခှဲရေးလုပျတဲ့တဲ့ ကြောငျးဆရာမြားခေါငျးဆောငျကလဲ သူတို့အမြိုး။
အလုပျသမားတှကေလဲ သူတို့နဲ့ ဆှမြေိုးနီးစပျတှေ...။
ဆှံ့နားမကွားကြောငျးက ကလေးတှဟော စကျရုပျတှလေို မသိကြိုးကြှနျပွုနကွေတဲ့ ဆရာ ဆရာမ အဟောငျးတှကေိုအကူအညီတောငျးမိရငျ နောကျတနေ့ ထိုထကျဆိုးသော အဖွဈမြားကွုံတှရေ့တာကွောငျ့... ဆရာမ အသဈနဲ့ လူမှုရေးအသငျးတှကေိုလာပွောနကွေတာဘဲဖွဈတယျ။
ဆှံ့ အနားမကွားကလေးတို့ရဲ့ မိသားစုတှဟော မြားသောအားဖွငျ့ ဆငျးရဲကွတယျ။ မိဘတှကေပါ ဒုက်ခိတတှမေို့ စီးပှားရေး မပွလေညျကွသူတှမြေားပါတယျ။ သားသမီးမြားကို ဂရုမစိုကျနိုငျပါ။ ကလေးမြားကလဲ ကွောကျလနျ့၍ မိဘမြားကို မပွောကွပါ...။
ဆရာမဟာ ရဲစခနျးကိုလဲ သှားပွောခဲ့ဖူးပါတယျ။
"ဪ... ဟုတျကဲ့... သကျသခေံအထောကျအထားမရှိဘဲ ဒီလို ဂုဏျသရရှေိတဲ့ လူကွီးမငျးတှကေို မေးမွနျးဖို့ဆိုတာ ဥပဒအေရ မဖွဈနိုငျပါဘူး။"
ကနျြတဲ့ ဆရာဆရာမတှရေော ပါးစပျပိတျ အခွိမျးခွောကျခံနရေပုံဘဲ။ ဆရာမနဲ့ ပရဟိတလူမှုရေး အသငျးတှေ.. ကလေးစောငျ့ရှောကျရေးအသငျးတှဟောကူညီဖို့ကွိုးစားပမေဲ့ အခညျြးနှီးပါ။
ဒီဂှမျဂြူးမွို့လေးမှာ သူတို့ကိုလှနျရဲသူမရှိ။ ထောကျလှမျးရေးအထိ တကျပွောလဲမထူးခွား....။
တာဝနျရှိသူတှဟော သူတို့နာမညျကွားလိုကျတာနဲ့ နားပငျးခငျြယောငျဆောငျနကွေတယျ။
အမှနျတော့ သူတို့ဟာ အရမျးခမျြးသာတာတာမို့ သူ့တို့ပိုကျဆံတှနေဲ့ အားလုံးကိုလှမျးမိုးထားတာဖွဈပါတယျ။ သူတို့ဟာ သှေးအေးရကျစကျသူတှအေဖွဈ နာမညျကွီးသူမြားလဲဖွဈလို့ တမွို့လုံးကကွောကျကွပါတယျ။
သူတို့ကိုထိရငျ တမြိုးလုံးတဆှလေုံးကို ဒုက်ခရောကျသှားမယျဆိုတာ ဒီမွို့ကလူတှေ အားလုံး သိနကွေတယျ။
သူတို့ဟာ ဂှမျဂြူးမွို့ရဲ့ အခမျြးသာဆုံး လူမိုကျတှပေေါ့.....။
ဒီလိုနဲ့....သူတို့ အုပျစုလိုကျ မုဒိနျးကငျြ့တဲ့သတငျးဟာ တိုးတိုးတိတျတိတျ ပြံ့နှံ့လာခဲ့တယျ။ MBC ဆိုတဲ့ ကိုးရီးယား ရုပျမွငျသံကွားဌာနအထိရောကျသှားတယျ။ လူမှုရေးအဖှဲ့အစညျးအခြို့နဲ့ ရုပျမွငျသံကွားအဖှဲ့က တိတျတဆိတျထောကျလှမျးခဲ့နကွေတယျ။
သူတို့တှေ ရဲတငျးလာကွတယျ။ဒုက်ခရငျဆိုငျရရငျ အသံထှကျပွီး မအျောနိုငျတဲ့ ဒုက်ခိတလေးတှမေို့ ဆရာတှသောမက အလုပျသမားတှကေပါ မုဒိနျးကငျြ့လာကွတယျ။
ဒီအဓမ်မမှု စပွီးပေါကျကွားခဲ့တာ ၂၀၀၀ ခုနှဈပါ..ဘယျသူမှ ဘာမှမတတျနိုငျခဲ့တာ ၂၀၀၅ နှဈအထိရောကျခဲ့ပါတယျ။
ဆရာ ဆိုတဲ့ အရခွေုံပွီး ဆှံ့ အ နားမကွားတဲ့ ဒုက်ခိတလေးတှကေို လိုရာသုံးပွီ...။
ဆှံ့ အ နားမကွား ကလေးမလေး
တယောကျဟာ ကိုယျဝနျရှိလာတယျ။သူတို့ဟာ ကလေးမလေးကို ဆေးရုံချေါသှားပွီး ကလေးဖကျြခလြိုကျတယျ...။
"ဟုတျပွီ...ဒါဟာ သကျသဘေဲ။ ဆေးမှတျတမျးရှိနတေယျ" ...။
ရုပျမွငျသံကွား (MBC) မှစုံစမျးရေး အဖှဲ့နဲ့ ကူညီသူတခြို့ဟာ ကြောငျးသူလေး သောကျရတဲ့ဆေးစာရှကျကို သကျသခေံအဖွဈ သခြောသိမျးလိုကျပါတော့တယျ။
၂၀၀၅ ခုနှဈမှာ ကိုးရီးယား MBC အသံလှငျ့ရုံမှ သတငျးကွငွောလိုကျပါတယျ။
"ဂှမျဂြူးမွို့ အငျဟှ ဆှံ့အနားမကွားကြောငျးမှာ မုဒိနျးမှုတှဖွေဈပှားနကွေောငျး သတငျးရရှိပါတယျ။"
တိုငျးပွညျက သိသှားတော့တယျ။ လူထုက ဆန်ဒပွကွတယျ။ သမ်မတက အထူးထောကျလှမျးရေးအဖှဲ့ဖှဲစပွေီး စုံစမျးမှုကို စတငျခဲ့ပါတယျ။
ဆငျးရဲလို့ ရှနေ့မေငှားနိုငျတဲ့ ဆှံ့ အ နားမကွားမိသားစုတှကေို အစိုးရရှနေ့တှေကေကူညီကွတယျ။
မုဒိနျးကငျြ့ခံရတဲ့ မိနျးကလေး ၉ ယောကျက တရားလိုအဖွဈ တရားဆိုငျပါတယျ။ ဒီ ၉ ယောကျကလှဲပွီး ကနျြတဲ့ မိနျးကလေးနဲ့ ယောကျြားလေးတှကေတော့ အကွောကျလှနျပွီးမလိုကျရဲပါဘူး။ တခြို့ကလဲ မိသားစုလိုကျ ပိုကျဆံပေး ခွိမျးခွောကျထားခွငျးခံရလို့ ဘယျလို ချေါချေါမလိုကျရဲကွဘူး။
တဖကျက အငျဟှကြောငျးမှ ကြောငျးဆရာမြား အလုပျသမား စုစုပေါငျး ၆ ယောကျကို တရားခံအဖွဈနဲ့ တရား ဆိုငျခဲ့ပါတယျ။
တရားလို မိနျးကလေးတယောကျက အဆိုတခုတငျသှငျးလိုကျတယျ။
"ကမြကို ဘယျနေ့ ဘယျရကျ ဘယျအခြိနျ ဘယျနရောမှာ မုဒိနျးကငျြ့ခံခဲ့ရတယျ။"
"သမီးကို မုဒိနျးကငျြ့တာ ဘယျသူလဲ"
စကားမပွောနိုငျတာကွောငျ့ သူမဟာ တရားခံကို လကျညှိုးထိုးပွီး ပွလိုကျတယျ။
အငျဟှဖကျက ရှနေ့ကေ ကြောငျးမှတျတမျးကို လှနျကွညျ့လိုကျတယျ။
"ဒီကလေးမဟာ ဒီအခြိနျမှာ ဘယျသူ ဘယျဝါနဲ့ ထမငျးစားနခေဲ့ပါတယျ။ ဒါဟာ လိမျတာပါ...။"
ဒီလို.......နဲ့ အစစ အရာရာ စစေ့စေ့ပျစပျ ကွိုတငျပွငျဆငျထားတဲ့ ကွောငျသူတျောအုပျ စုဟာ ဆှံ့ အ နားမကွားတဲ့ကလေးတှကေိုတရား ခှငျမှာ အနိုငျယူခဲ့ပွနျတယျ။ ဒုက်ခိတ ကလေးတှေ တရားရှုံးပါတယျ။
ဒီသတငျးကွားတဲ့ အသကျ ၇၁နှဈအရှယျ အငျဟှကြောငျးမှ ကြောငျးဆရာဟောငျးတယောကျက မခံစားနိုငျတော့ပွီလေ...။ သူဟာအစိုးရရှနေ့ကေို ဆကျသှယျလာပါတယျ။
"၁၉၆၄ ခုနှဈကပါခငျဗြာ။ သူတို့လှို့ ဝှကျခကျြကိုသိနတေဲ့ ကနြေျာ့ကို ကြောငျးအုပျကွီးနဲ့ သူ့ညီက ကနြေျာ့ကို ရိုကျနှကျပွီး ကြောငျးကထုတျပဈတယျ... ခွိမျးခွောကျမှုတှကေိုလဲ ဆကျတိုကျလုပျခဲ့ပါတယျ။"
"လှို့ ဝှကျခကျြက ဘာလဲခငျဗြာ?" ရှနေ့ကေမေးလိုကျတယျ။
" ကြောငျးအုပျကွီးတို့ ညီအကိုဟာ ဒီဓာတျပုံထဲမှာပါတဲ့ ဆှံ့ အ နားမကွား ကြောငျးသားလေး (အသကျ ၇ နှဈ) ကို ရိုကျနှကျပွီး အစာလုံးဝမကြှေးဘဲ သတေဲ့အထိ အခနျးထဲ ထညျ့ထားခဲ့တယျ။ အစာငတျပွီးသသှေားတော့မွမွေုပျလိုကျပါတယျ။
နောကျထပျ ၆ လအကွာ ကြာငျးသူမလေးကို အစားငတျထားပွီး အခနျးထဲ သတေဲ့အထိ ထညျ့လှောငျခဲ့ပါတယျ ..။အသကျ ၆ နှဈအရှယျ ကလေးမလေးဟာ ဗိုကျဆာလှနျးလို့ နံရံမှာကပျထားတဲ့ စက်ကူတှကေို ခှာစားခဲ့တာ ကနြျော တှပေ့ါတယျ။ သူတို့ကို လူသတျမှုနဲ့တရားစှဲပေးပါခငျဗြား"
ဒီဟာလဲ သကျသမေခိုငျလုံလို့ အပယျခခြံခဲ့ရတယျ။
နောကျဆုံးတော့ တရားလိုရဲ့ ရှနေ့ဟော နောကျဆုံး ဝှကျဖဲကိုခပြွလိုကျတယျ။
"ကလမေဟာ ကိုယျဝနျဖကျြခခြဲ့ပါတယျ။ ဒါကတော့ အဲဒိနကေ့ သူသောကျခဲ့တဲ့ဆေး စာရှကျပါ။"
နောကျတပတျကတြော့ ကိုယျဝနျဖကျြခခြဲ့တဲ့ ဆရာဝနျ အစဈခံရပါတယျ။
ဆရာဝနျက ဆေးမှတျတမျးနှငျ့တကှ သကျသပွေပွီးထှကျဆိုလိုကျပါတယျ။
"ဘယျ ကိုယျဝနျမှ ကနြျောဖကျြမခခြဲ့ပါဘူးခငျဗြာ။ နမေကောငျးလို့ အကိုကျအခဲပြောကျဆေးပေးခဲ့တာပါ။"
မုဒိနျးမှုဆိုတဲ့ ကွီးလေးတဲ့အမှုကွီးကို တရားခံဘကျက ခဖြေကျြနိုငျခဲ့တယျ။ ကလေးမြားကို နှိပျစကျမှု.. စိတျနာကငျြအောငျ ပွုလုပျမှု စသညျ စသညျဖွငျ့...တရားခံ ၆ ယောကျထဲက ၂ ယောကျကတော့ ဂှမျဂြူးမွို့ထဲက အပွငျမထှကျခှငျ့ (အကယျြခြုပျ)နဲ့ ထောငျ ရှဈလသာကခြဲ့ပါတယျ။အမှုက ၈ လကြျောကွာခဲ့တာကွောငျ့ ခလြေိုကျပွီးအကယျြခြုပျတောငျ တရကျတောငျမှမကခြဲ့ပါဘူး။
ကြောငျးအုပျဆရာကွီး ( သားအကွီးဆုံးက ) အလုပျကွမျးနဲ့ထောငျဒါဏျ ၅ နှဈ (သို့)ဒါဏျ ငှေ သုံးသနျး ...။ သူဟာ ဒါဏျငှပေေးဆောငျနိုငျသဖွငျ့ ထောငျထဲမှာမနခေဲ့ရပါ။
ကနျြသူတှေ ကတော့ ၁နှဈတောငျမပွညျ့တဲ့ ထောငျဒဏျဘဲရခဲ့ပါတယျ။
အယူ ခံလုံးဝ ထပျမရတော့ပါ။
ဒီအဓမ်မအမှုဟာ မြားစှာသော ကိုးရီးယားပွညျသူတှကေို မကျြရညျကြ နာကငျြစပေါတယျ။အမှနျတရားကိုလိုလားတဲ့ ပွညျသူတှဟော ဆှံ့ အနားမကွား ဒုက်ခိတ ကြောငျးသူကြောငျးသားလေးတှေ ဒီလို စိတျဓာတျ အရိုကျခြိုးခံလိုကျရတာကို ဝမျးနညျးကွပါတယျ။
သူတို့ဟာ ဘယျလိုမှ အယူခံမရ နောကျဆုံးမှာ ဒီအဖွဈအပကျြအမှနျကို ရုပျရှငျကတဆငျ့ ကမ္ဘာသိအောငျလုပျဖို့ ဆုံးဖွတျခဲ့တယျ။
ဆှံ့ အ နားမကွားကလေးတှရေဲ့ နာကငျြမှုကို ကိုယျစားပွုပွီး "도가니" လို့ အမညျပေးထားတဲ့ရုပျရှငျကိုဖနျတီးခဲ့တယျ။
ဒီရုပျရှငျကို "Silenced" လို့လူသိမြားပါတယျ။ ဒီရုပျရှငျထှကျလာတဲ့အခါ ...၆ နှဈကွာခဲ့ပွီမို့ မပြေ့ောကျသလောကျဖွဈနတေဲ့ ပွညျသူတှရေဲ့နာကညျြးခကျြဟာ ပွနျလညျရှငျသနျခဲ့တယျ။ လူထုအုံကွှမှုဖွဈပျေါခဲ့တယျ။
အပွဈမရှိသလို ဟနျမပကျြဆကျဖှငျ့ထားတဲ့ အငျဟှ ကြောငျးကွီးကို သူတို့တှေ ပိတျခဲ့ရပါတယျ။
တရားရုံးမှာ အမှုပွနျလညျဖှငျ့ခှငျ့ရခဲ့ပါတယျ။၂၀၁၂ ခုနှဈမှာ အသကျ ၆၃ နှဈအရှယျရှိတဲ့ အုပျခြုပျရမှေုး( ဥက်ကဋ်ဌရဲ့ ဒုတိယမွောကျသား ) ဟာ ၁၈ နှဈမိနျးကလေးကို မုဒိနျးကငျြ့တယျဆိုတာ ထပျ ဖျောထုတျနိုငျခဲ့ပွီး ထောငျဒါဏျ ၁၂နှဈကခြဲ့ပါတယျ။
ဒီဖွဈရပျမှာ တောငျကိုးရီးယားတို့ရဲ့ ငုံ့မခံတတျတဲ့ စိတျဓာတျနဲ့စညျးလုံးမှုဟာ ကမ္ဘာက ခြီးကြူး အသိအမှတျပွုရပါတယျ။
ကံဆိုးလို့ မှေးရာပါ စကားမပွာနိုငျတဲ့....
အသံထှကျပွီး အျောဟဈ အကူအညီမတောငျးနိုငျတဲ့ ......
ဆငျးရဲတဲ့ ကလေးတို့ရဲ့ နာကငျြမှုတှေ...
မကျြရညျတှဟော ကာလကွာရှညျစှာ လဈလြူရှုခွငျးကို ခံခဲ့ရတယျ...။
ဘဝ နိမျ့ကတြဲ့သူတို့လေးတှကေို နှဈပေါငျးမြားစှာ လိငျကြှနျအဖွဈဆကျဆံခဲ့သူတှဟော ဂုဏျသရရှေိ...လူခမျြးသာ...ကြောငျးဆရာဆိုတဲ့ ဂုဏျပုဒျတှနေဲ့ အမှနျတရားရဲ့ပါးစပျကို နှဈပေါငျးမြားစှာပိတျထားနိုငျခဲ့တယျ...။
စကားမပွောတတျတဲ့ ကလေးမြားဟာ ဘဝပေးအခွအေနအေရ စကားမပွောတတျခွငျးဖွဈပမေဲ့ စကားပွောတတျတဲ့ လူ့ဘောငျလောကကွီးကလညျး ဂုဏျရှိနျဝါ ငှကွေေးတို့ရဲ့ ဖိနှိပျမှုအောကျမှာ အ, နခေဲ့ကွတယျ....။
ငှကွေေးကွောငျ့ ပါးစပျပိတျ အ, နခွေငျးဟာ သူရဲဘောကွောငျပွီး ရှကျစရာကောငျးလှနျးတယျဆိုတာကို မသိခငျြယောငျဆောငျနတေဲ့သူတှရှေိသလို .....ဂုဏျရှိနျဝါမကျြနှာဖုံးအောကျမှာ ယုတျညံ့တာတှလေုပျနတေဲ့ လူကွီးလူကောငျးအမညျခံတှကေလညျး သူတို့ရဲ့ ယုတျမာမှုကို တနျခိုးသွဇာပွညျ့စုံခွငျးလို့ထငျပွီး မာနျတကျနကွေလရေဲ့...။
ဒီလူတှအေတှကျ ဆငျးရဲသား လူတနျးစားတှဟော ဘယျအခြိနျအထိ စတေးနရေမှာပါလဲ..!?
ကမြတို့ မွနျမာနိုငျငံမှာလညျး အနှဈ ၅ဝလုံးလုံး ...အခုထကျထိ...အဓမ်မမှုတှေ အလှနျမြားလှနျးလို့ ခေါကျရိုးကြိုးသလိုတောငျဖွဈနပေါပွီ...။ဒါအတှကျ ကမြတို့ ဘာလုပျကွမလဲ...?
ကမြတို့လဲတောငျကိုးရီးယားနိုငျငံရဲ့ ကောငျးသောအခကျြတှကေို အတုယူရပါမယျ...။ဒါတှကေတော့....
🌟မတရားမှုကို ငုံ့မခံပဲ ရဲရငျ့မှု..။
🌟တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ရိုငျးပငျးကူညီပွီးပွညျသူအခငျြးခငျြး အကာအကှယျပေးမှု..။
ငှကွေေးကွောငျ့ ပါးစပျပိတျပွီး အ, နခွေငျးမှ အမွနျဆုံးနိုးထပွီး အမှနျတရားပါးစပျမြား ရဲရဲဝငျ့ဝငျ့ ပှငျ့နိုငျဖို့ လိုအပျပါတယျ...။
မတရားမှုတဈခုဖွဈပှားခွငျးဟာ ကိုယျနဲ့တိုကျရိုကျမသကျဆိုငျရငျတောငျ လူသားမြိုးနှယျတဈဦးအနနေဲ့ တာဝနျရှိတယျလို့သာ ခံယူလာနိုငျမယျဆိုရငျတော့ အဓမ်မဝါဒီမြား သကျဆိုးမရှညျနိုငျကွလိမျ့ဘူးလို့ မြှျောလငျ့မိကွောငျးပါ...။
ဇှနျလ ၃၀ ရကျ ၂၀၁၇